RAR Fitaovana fanamboarana. RAR Rindrambaiko fanarenana. fanamboarana RAR Files.
DataNumen RAR Repair dia ny tsara indrindra RAR fitaovana fanamboarana sy fanarenana eto amin'izao tontolo izao. Afaka manamboatra ny mpanao kolikoly izy io RAR arisiva ary avereno arak'izay azo atao ny angon-drakitrao, amin'izay hampihena ny fatiantoka amin'ny kolikoly fisie.
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,641)
Nahoana DataNumen RAR Repair?
Ny tahan'ny fanarenana dia ny most mason-tsivana lehibe a RAR vokatra fanarenana. Miorina amin'ny fitsapana feno nataonay, DataNumen RAR Repair manana ny tahan'ny fanarenana tsara indrindra, tsara lavitra noho ny mpifaninana hafa rehetra, ao anatin'izany ny WinRAR sy ny hafa RAR fitaovana fanamboarana, eny an-tsena!
Mianara bebe kokoa momba ny fomba DataNumen RAR Repair mifoka ny fifaninanana
Tsy nanana olana tamin'ity fisehoan-javatra miavaka ity aho. Teny iray ho an'ireo olona izay mety nanana olana vitsivitsy. Raha ny 'DataNemen Rar Fanamboarana 'Program
Faly aho fa handao ny fihenan-tsofina momba ny fifandraisako tsara amin'ny vokatrao _ toro-hevitra ihany koa momba ny tsy fahombiazan'ny tsindraindray
Endri-javatra lehibe ao DataNumen RAR Repair v3.5
Fanohanana hanamboarana ny kinova rehetra an'ny RAR ary fisie SFX.
Fanohanana hamerenana ireo tahiry marobe sy marobe.
Fanohanana hamerenana ireo arisitra voaaro amin'ny teny miafina.
Tohano hahitana sy hisafidy ny RAR ary ny arsiva SFX hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Fanohanana amin'ny fanamboarana RAR fisie amin'ny media maloto, toy ny floppy disk, Zip kapila, CDROM, sns.
Fanohanana hanamboarana andiany iray RAR ary fisie SFX.
Fanohanana amin'ny fanamboarana RAR archives ngeza 8, 388, 608 TB (izany hoe 8, 589, 934, 592 GB).
Tohano ny fidirana amin'ny Windows Explorer, amin'izay ianao afaka manamboatra a RAR tahirizo miaraka amin'ny menio misy ny Windows Explorer mora foana.
mampiasa DataNumen RAR Repair hamerina simba RAR Archive
Raha ny anao RAR simba na simba ny arisiva noho ny antony maro samihafa ary tsy afaka manokatra azy io ara-dalàna ianao dia afaka mampiasa DataNumen RAR Repair hijerena ny RAR tahirizo ary avereno araka izay azo atao ny fisie ao anatiny.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenana izay simba na simba RAR archive with DataNumen RAR Repair, azafady fehezo WinRAR ary rindranasa hafa mety hiditra amin'ny RAR tahiry.
Safidio ny simba na simba RAR arisiva hamboarina:
Azonao atao ny mampiditra ny RAR anarana archive mivantana na kitiho ny
bokotra hijerena sy hisafidianana ny arisiva. Azonao atao koa ny manindry ny
bokotra hahitana ny RAR arisiva hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Default (nitranga in- DataNumen RAR Repair dia ho sitrana ary hongotantsika ireo rakitra ao amin'ny RAR tahirizo ao anaty lahatahiry antsoina hoe xxxx_recovered, izay xxxx no anaran'ilay loharano RAR tahiry. Ohatra, ho an'ny loharano RAR archive Simba.rar, ny lahatahiry output default dia ho Damaged_recovered. Raha te hampiasa anarana hafa ianao dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
Azonao atao ny mampiditra mivantana ny anaran'ny lahatahiry output na tsindrio ilay
bokotra hijerena sy hisafidianana ny lahatahiry.
bokotra, ary DataNumen RAR Repair start scanning sy fanamboarana ny loharano RAR rakitra. Bara fandrosoana
Aorian'ny fizotry ny fanamboarana, raha ny loharano RAR Azo amboarina soa aman-tsara ny fisie, ho hitanao boaty hafatra toy izao:
Ankehitriny ianao dia afaka manokatra ny lahatahiry famoahana voalaza ao amin'ny dingana 3 ary manamarina ireo fisie sitrana ao.
DataNumen RAR Repair Navoaka tamin'ny 3.5 Mey 3 ny 2021
DataNumen RAR Repair 3.2 dia navoaka tamin'ny 18 Desambra 2020
DataNumen RAR Repair Navoaka tamin'ny 3.0 Novambra 4 ny 2020
DataNumen RAR Repair Navoaka tamin'ny 2.9 septambra 9 ny 2020
Hatsarao ny fanodinana temporary fisie.
DataNumen RAR Repair Navoaka tamin'ny 2.8 aprily 19 ny 2020
Amboary ny tahan'ny fanarenana sy ny tahan'ny fanarenana.
DataNumen RAR Repair Navoaka tamin'ny 2.7 Novambra 18 ny 2019
DataNumen RAR Repair Navoaka tamin'ny 2.6 Jolay 24 ny 2019
DataNumen RAR Repair 2.5 dia navoaka tamin'ny 28 Jona 2018
DataNumen RAR Repair Navoaka tamin'ny 2.3 aprily 20 ny 2018
Hatsarao ny fanarenana ho an'ny encrypted RAR tahiry.
DataNumen RAR Repair 2.2 dia navoaka tamin'ny 19 Sep 2016
DataNumen RAR Repair 2.1 dia navoaka tamin'ny 14 septambra 2013
DataNumen RAR Repair 2.0 dia navoaka tamin'ny 6 Jolay 2013
Manohana MandresyRAR v5.x.
Avereno soratana ny interface interface.
DataNumen RAR Repair 1.2 dia navoaka tamin'ny 27 Sep 2006
Fanohanana handefasana maloto RAR na SFX archives amin'ny mpizara ftp anay.
Fanohanana hamerenana ireo lahatahiry ao RAR tahiry.
Hatsarao ny mekanisma fanarenana lesoka.
Sehatra fanarenana angona arisiva, ao anatin'izany ny fitaovana fanarenana ho an'ny mpanao kolikoly Zip ary ny arsiva SFX, RAR archives, Unix TAR archives, ary Microsoft CAB tahiry.
Amboary ary avereno maloto CAB tahiry.
Amboary sy avereno ny Unix simba TAR tahiry.
Amboary ary avereno maloto Zip ary fisie (SFX) fisintomana tena.
Manamboatra sy mamerina ny backup Microsoft maloto (BKF) fisie.